AMC's customers in Myanmar are factories that produce product for companies based in Europe, USA, Japan, and China.
Our Myanmar services include
Productivity and Profitability Improvement and Training for Factories in Myanmar
Technical Development Support (CAD, Grading , Fabric Testing)
3rd Party Quality Inspection Services
Talent Scout Japanese and Myanmar Human Resources Consulting. We offer you local staff who are trained and already professional, and as well, candidates who are Japanese experts
Factory Site Location
AMC တွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ customer များအများအပြားရှိပါသည်။ customer များထဲတွင် အဝတ်အထည်ကုမ္ပဏီများ၊ အကြီးစားကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများနှင့် အာရှ တလွှားရှိနိုင်ငံအနှံ့တွင် တည်ရှိသော ဂျပန်အမျိုးသားပိုင်စက်ရုံများပါဝင်ပါသည်။
ဤဂျပန်အခြေစိုက် customer များသည်ဂျပန်စျေးကွက်အတွက်ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံမှစက်ရုံများကို ရှာဖွေလျက်ရှိပါသည်။
ဂျပန် customer များသည် ထုတ်ကုန်များကို အရည်အသွေးမြင့်မြင့်၊ အချိန်မှန်မှန် ကန်ကန်နှင့် အော်ဒါအရည်အတွက် ပမာဏနည်းနည်းအတွက်ဆိုလည်း ထုတ်လုပ်နိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံ မှကုမ္ပဏီများနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန်လည်း လွန်စွာစိတ်ဝင်စားမှုရှိကြပါသည်။
AMC သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်ရုံများနှင့် လက်တွဲအလုပ်လုပ်ရာတွင် ၎င်းစက်ရုံများ၏ ထုတ်ကုန်များ အရည်အသွေးမြင့် တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ဖို့နှင့် အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ရရှိရန်အတွက် သင်တန်းများပို့ချပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
AMC သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနေပါသည်။
ထုတ်ကုန်တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းနှင့် အာရှနှင့်အရှေ့ တောင်အာရှရှိ ဂျပန်အမျိုးသားပိုင်ကုမ္ပဏီများကိုသင်တန်းပေးခြင်း
အရည်အသွေးစနစ်တကျမြှင့်တင်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်သင့်သည်များကို ဆွေးနွေး အကြံပေးခြင်း
စက်ရုံ၏ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအားကို စစ်ဆေးပေးရာတွင် အရည်အသွေး၊ ကုန်ထုတ် စွမ်းအားနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ပါဝင်ပါသည်။
လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစွာလုပ်နိုင်စွမ်း ရှိသော စက်ရုံများကိုရှာဖွေပေးခြင်း
တင်းကျပ်ပြီးလိုအပ်ချက်များမြင့်မားသော ဂျပန်နိုင်ငံစျေးကွက်အတွက် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်နိုင်သောစက်ရုံများကို ရှာဖွေပေးခြင်းနှင့်ပစ္စည်းပို့နိုင်သော အခြေအနေ များကို ရှာဖွေပေးခြင်း
ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုမှုအပေါ် လုပ်ဆောင်သင့်သည်များ ကို စစ်ဆေးအကြံပေးခြင်း
AMC သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်သော CSR audit များမှ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စံချိန်ကို တန်းဝင်အဆင့်မှီအောင်အကြံပေး လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း
လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော အစွမ်းအစ၊ အလားအလာရှိသူများကို စုံစမ်းရှာဖွေပေးခြင်း(ဂျပန်နှင့်မြန်မာလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များအပေါ် အခြေပြုဆွေးနွေး အကြံပေးခြင်း)
သင်လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သောအလားအာရှိသည့် သင့်တော်သူများ၏ ကိုယ်ရေး ရာဇဝင်များကိုပေးခြင်း
သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် သေချာစွာလေ့ကျင့်ထားပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖြစ် ရပ်တည်နေသောဒေသခံများကိုသာမက ဂျပန်ပညာရှင်များကိုပါငှားရမ်းနိုင်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
AMC သည် ရန်ကုန်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် မန္တလေးတိုင်းတို့တွင် အထက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကို လှိုက်လှဲစွာဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
ဤ၀န်ဆောင်မှုအတွက် AMC မှ ၎င်း၏ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ယောက်ကို သင်တို့၏ စက်ရုံတွင် အချိန်ပြည့်၀န်ထမ်းအဖြစ် (အခြေခံအားဖြင့် ၁ နှစ်စာချုပ်သက်တမ်းဖြင့်) ယာယီခန့် ထားသည့် ၀န်ဆောင်မှုမျိုးပေးပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သင်၏ စက်ရုံကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်း များနှင့်အညီ အချိန်တိုအတွင်းဖြစ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးဖြင့် တိုးတက်သွားစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
TPP (ပစိဖိတ်ဖြတ်ကျော်လက်တွဲရေးသဘောတူညီချက်စာချုပ်) အရ ယနေ့အချိန်တွင် တော်တော်များများသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအပေါ်တွင် အာရုံစိုက်လာကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်ရှိစက်ရုံများသည် အခြေကြီးဖောက်သည်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် စက်ရုံများ၏ အရည်အသွေးကို မဖြစ်မနေမြှင့်တင်ဖို့လိုအပ်လာပြီဖြစ်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများ၊ စုံစမ်းမှု များအတွက် မိတ်ဆွေတို့ထံမှ ရောက်ရှိလာမည့် email များကိုလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ထိုသို့ email ပို့ရာတွင် မြန်မာဘာသာ (သို့မဟုတ်) အင်္ဂလိပ်ဘာသာအသုံးပြု၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့အားဖြင့် သင့်လုပ်ငန်း၏ ထုတ်ကုန်တိုးတက်မြင့်မားလာရေးနှင့် အမြတ်အစွန်းများများ ရရှိရေးအတွက် AMC မှကူညီရာတွင် မည်သို့အားဖြင့် အစပျိုးဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကို စတင်ဆွေး နွေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင့်ဘက်ကကမ်းလှမ်းလာပါလျှင် သင်နှင့်ပိုမို၍ စကားပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ရန် သင်၏ စက်ရုံသို့ အခမဲ့လာရောက်လည်ပတ်၍ အချိန်တစ်ခုပေးနိုင်ရန်စီစဉ်နိုင်ပါသည်။
ဤခလုတ်ပေါ်ကိုနှိပ်၍ email ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ATM Density in Asia
Khin Wine Phyu
World Bank Optimistic About Myanmar Outlook Though Problems Persist
Zat Pwe of Shwe Man Thabin
Myanmar Banks Prepare for Direct Transactions With USA Banks